Vivo S1 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Ọtụtụ ụdị dị na gam akporo na-akụ nzọ na igwefoto nwere ike ịdọrọ na ekwentị ha. Huawei ga-abụ otu n'ime ha n'oge na-adịghị anya. Otu n'ime ụdị ihe eji eme ihe bụ Vivo. Onye na-emepụta China ahapụgoro anyị ọtụtụ ekwentị nwere ụdị igwefoto a, dịka S1 ma ọ bụ X27 nso. Akara ahụ na-enye Vivo S1 Pro ugbu a, nke nwekwara mmewere.
Nke a Vivo S1 Pro, dịka anyị nwere ike ịkọwa, ọ bụ ekwentị dịtụ ike karịa S1 na akara ahụ hapụrụ anyị izu ole na ole gara aga. Ọdịdị dị n'etiti ụdị abụọ ahụ yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na ọkwa teknụzụ anyị na-ahụ ọdịiche ole na ole n'etiti ha abụọ. Ugbu a, anyị amaraworị ihe niile gbasara ekwentị a.
Ebumnuche nke ekwentị ahụ, n'ihi igwefoto a nwere ike ịgbanwe, bụ nke ihuenyo zuru oke. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ igwefoto azụ atọ na ya, na-eme ka o doo anya na ese foto bụ ihe dị mkpa na mpaghara ahịa a. Ya mere, egosiri na ọ bụ ezigbo nhọrọ na mpaghara ahịa a.
Vivo Z3X: akara ngosi ọhụụ ọhụụ
1 Vivo S1 Pro nkọwa
Vivo S1 Pro nkọwa
Nke a Vivo S1 Pro biara na otutu ihe ndị anyị na-ahụ ugbu a n'etiti etiti na gam akporo. Nnukwu ihuenyo, na mgbakwunye inwe ọtụtụ igwefoto azụ. Ya mere, ọ na-akwado ọtụtụ akụkụ ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe na mpaghara ahịa a. Ndị a bụ nkọwa nke ekwentị:
Ihuenyo: Super AMOLED 6,39 sentimita asatọ na mkpebi 2340 x 1080 na 19,5: 9 ruru
NhaziAha nhazi: Qualcomm Snapdragon 675 AIE
Nchekwa ime: 128/256 GB (gbasaa na microSD ruo 256 GB)
Igwefoto n'ihu: 32 MP nwere oghere f / 2.0
Rear igwefoto: 48 MP nwere oghere f / 1.78 + 8 MP nwere oghere f / 2.2 obosara sara mbara + 5 MP nwere oghere f / 2.4
Usoro njikwa: A gam akporo 9 achịcha na Funtouch OS 9
Batrị: 3.700 mAh
Njikọ: 4G, Wi-Fi 802.11 a / c, Bluetooth, micro USB, GPS, GLONASS
ndị ọzọ: Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo
Akụkụ: 157,25 x 74,71 x 8,21 mm
Ibu ibu: 185 grams
Igwefoto nwere ike ịbụ ihe kachasị ike na Vivo S1 Pro. Branddị akara ndị China elebarala ihe mmebu a anya na ngwaọrụ. Na n'ihu otu ihe mmetụta, na igwefoto a na-agbagharị, 32 MP. Igwefoto mara mma nke iji were onwe gị oge niile. Mgbe ị nọ na igwefoto okpukpu atọ, yana ihe mmetụta sensọ 48 MP. Na mgbakwunye, ha niile na-akwado site na ọgụgụ isi, iji chọpụta ọnọdụ dị mma na arụmọrụ ka mma n'ozuzu.
Nkọwa ndị ọzọ agbasoro nke ọma na ihe anyị na-atụ anya site na nke a. Companylọ ọrụ ahụ na-ewebata Snapdragon 675 dị ka ihe nhazi na ekwentị. Ọ gbasara Ọkọlọtọ ọhụrụ Qualcomm maka etiti etiti, Nke na - anakọta àmà nke Snapdragon 660. Ọ na - abịa na njikọta abụọ nke RAM na nchekwa. Mgbe anyị hụrụ batrị nwere ikike 3.700 mAh. Na mgbakwunye na nhazi na ọnụnọ nke Android Pie, nke nwere ọrụ njikwa batrị dị iche iche, o kwesịrị inye ndị ọrụ ezigbo nnwere onwe. N'okwu a, a na-etinye ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo, ebe anyị na-ahụwanye ugboro ugboro n'ahịa.
Dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị, nke a Vivo S1 Pro abanyelarị na China, ebe enwere ike ịzụta ya ugbua. Ruo ugbu a ọ nwebeghị ozi gbasara mmalite ya na Europe. The ika abụghị otu n'ime ihe ndị kasị mma mara na Europe, n'ihi ya, ọ bụ eleghị anya, na ekwentị na-agaghị eze oru. Ma anyị na-eche ụfọdụ nkwenye n'aka gị.
Ekwentị ahụ na agba abụọ: acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara, nke anyị nwere ike ịhụ na foto ahụ. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ nsụgharị abụọ nke ya. Otu nwere 6/256 GB na nke ọzọ nwere 8/128 GB. Ihe na-atọ ọchị bụ na ụdị abụọ nke Vivo S1 Pro a na-abata otu ọnụahịa ahụ. A na-emepe ha na ọnụahịa nke yuan 2.698, nke bụ ihe dị ka euro 357 ịgbanwe. Ọ bụrụ na ebubere ya na Europe, ọ ga - ekwe omume na ọ ga - adị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Vivo S1 Pro: Igwe ọhụụ dị n'etiti igwefoto nwere ike iwepụ
Nzacha ndị nhazi nke Xiaomi Mi A3
A na-emegharị gam akporo Auto na ndozi na ogwe ihe nchọgharị na ọkwa